Sirdoonka Britain oo aqoonsaday nin ka soo muuqday Muuqaal IS soo bandhigtay – STAR FM SOMALIA
Sirdoonka Britain oo aqoonsaday nin ka soo muuqday Muuqaal IS soo bandhigtay
Sirdoonka Britain ayaa aqoonsaday nin ka soo muuqday Muuqaal ay soo bandhigtay maalin ka hor Kooxda dowladda Islaamiga oo ku saabsanaa dilka shan nin oo lagu eedeeyay inay u basaasayeen dowladda Britain.
Ninkan ayaa ku hadlayay Lahjada English-ka, waxaana lagu tilmaamay Jihadi John-ka labaad, isagoo u hanjabay Ra’iisul Wasaaraha Britain David Cameron.
Waxaa uu xirnaa dareys milateri, wajigana waa uu ka duubnaa, waxaa uu gacanta ku heystay bastoolad, iyadoo ay dhinacyada ka taagnaayeen afar nin.
Sirdoonka Britain ayaa BBC-da u sheegay in ninkan ay rumeysan yihiin inuu yahay Siddartha Dhar oo ah Hindu ku noolaa bariga London, waxaa uu qaatay Diinta Islaamka, isagoo sanadkii 2014 aaday Suuriya.
Ninkan ayaa damiin lagu sii daayay, markii Booliska Britain ay xireen, kadib wareysi uu siiyay BBC-da bishii Agosto, waxaana bil kadib loo xiray inuu taageeray koox xagjir ah oo lagu magacaabo Al-Muhaajiruun.
Gabar la dhalatay ayaa u sheegtay BBC-da inay aaminsan yahay in codka ay maqasha uu yahay walaalkeed, balse ay si rasmi ah u xaqiijin karin.
Dad badan ayaa sheegay in ninka wajiga duubtay uu ahaa Siddartha Dhar oo la baxay magaca Abuu Rumeysah.
Boqolaal dagaalyahano u dhashay Britain ayaa ku biiray kooxda Daacish ee ka dagaalama dalalka Suuriya iyo Ciraaq.
Kooxo hubaysan oo weerar ku qaaday Xarun Turkiga ay ku leeyihiin Magaalada Muqdisho
Diyaarado Saanad Millateri u sida ciidanka Ethiopia oo Kismaayo ka degay
Agaasimaha hay’adda nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa magacaabay Madaxa Shaqaalaha NISA, kadib markii xilka laga qaaday Taliyihii hore ee xilkaas haayay Cabdullaahi Kulane.
Agaasime Fahad Yaasiin ayaa Cabaas Yacquub u magacaabay Madaxa Shaqaalaha hay’adda nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA, isagoo bedelaya Cabdullaahi Kulane oo uu xilka qaadis ku sameeyay Ra’iisul Wasaare Rooble.
Cabaas ayaa ka mid ahaa hoggaanka sare ee NISA, waxaana uu haayay xilka Maamulka, Maaliyadda iyo Tiknoolijiyada hay’adda, waana ninka loo badinayo inuu noqon doono Kusimaha Agaasimaha hay’adda NISA, sida la sheegay.
Magacaabista Cabaas Yacquub ayaa ka dambeeysay, ka gadaal markii Ra’iisul Wasaare Rooble xilalkii uu ka qaaday Cabdullaahi Kulane oo ahaa Taliyaha Shaqaalaha NISA iyo Taliyihii nabadsugida Garoonka Aadan Cadde, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay jebiyeen amar uu soo saaray Rooble.
Wafdi uu hoggaaminayo Gudoomiyaha Gudiga xalinta khilaafkaadka doorashooyinka Soomaaliya Cabdullaahi Abyan Nuur ayaa gaaray Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose, iyada oo halkaasi siwyen loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga oo ka kooban 5 Xubnood ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha Magaalada Kismaayo kusoo dhaweeyay Gudoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka heer Dowlad Goboleed ee Jubaland Dr Siyaad Maxamed Mursal iyo xubno ka tirsan Guddiga.
Xubnaha Guddiga xalinta khilafaadka doorashada Soomaaliya ayaa goob joog u noqon doona doorashada xubnaha Aqalka sare ee dalka ee lagu wado in ay maalinta barito ah ka qabsoonto Magaalada Kismaayo.
Afhayeenka guddiga xalinta Khilaafaadka doorashada ayaa sheegay in ku dadaali doonaan inay si cadaalad ah u xaliyan khilaaf kasta oo kasoo laabta doorashooyinka dhacaya ee labada Aqal.
Waxaa uu hadalkiisa uu intasi ku daray in Xubnaha guddiga ay goobjoog ka noqon doonaan Goobaha ay ka dhacayaan doorashada, isla markaana, iyaga oo raacaya shuruucda ay soo saareen Golaha wadatashiga Qarankaay xalin doonaan khilaafka yimada.
Waxaa uu ku baaqay In lagu dadaalo in dalka laga qabto doorasho xor iyo xalaal ah, basle aysan dhicin doorasho la kala jiita, isaga oo sidoo kale ku baaqay in lala Shaqeeyo gudiyada doorashooyinka iyo Ciidamada Amniga.
Qabashada doorashooyinka Xildhibaannada labada Aqal ayaa dhawaan ka bilaabaneysa dalka, iyada oo ay socdaan diyaar garowgiii ugu dambeeyay, waxaana Maamulka Jubbaland uu noqon doonaa Maamulka ugu horreeya ee qabta doorashada Aqalka Sare.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo dowladdaha hoose ee dowlad Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa guddoomiye cusub u magacaabay degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle.
Maxamed Sheekh Maxamuud (Dhoobeey) ayaa loo magacaabay inuu noqdo Guddoomiyaha cusub ee degmada Matabaan,halka guddoomiye ku xigeenka degmada Matabaan loo magacaabay Ducaale Aadan Cabdi.
Maamulka Hirshabelle ayaa inta baddan waxa uu bedela maamulada degmooyinka gobolka Hiiraan iyadoo lagu eedeeyo inuusan waxba ka bedelin maamulada ka jira degmooyinka gobolka Sh/dhexe.
Dhawaan ayaa guddoomiye cusub loo magacaabay degmada Buuloburte ee isla gobolka Hiiraan.
Hoos ka Akhriso :-
Maamulka Koonfur Galbeed Oo Magacaawday Guddi Baarlamaan Ee Doorashada Aqalka Sare.
Goobaha Ganacsiga Ee Magaalada Jowhar Maanta Xiran.
Madaxweyne Deni Oo Guddi magacaabay
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Jubbaland Oo soo saaraya liiska musharaxiinta Aqalka sare
Gabar Soomaaliyeed oo meydkeeda laga helay Magalada Minneapolis
Maxamed “Cirro” Oo Gaaray Magaalda Kismaayo.
Dagaal U Dhaxeeya Ciidanka Dalwada iyo Alshabaab Oo Ka Socda Galmudug.
Kismaayo Oo Laga Dareemaayo Qabanqaabada Doorashada Kurasta Aqalka Sare.
Ciidamada Dawlada oo Howlgal Ka Sameeyey Tuulooyin Hoos Yimaada Balcad
Dagaal Dhexmaray Ciidamo Kawada Tirsan Dawlada.
Rooblle Oo Kulan Laqaatay Cabdixaashi iyo Mahdi Guuleed.
Wasiirka Difaaca & Arimaha Dibadda Airland Oo Muqdisho Soo Gaaray.